Iindaba -Imakethi ye-elektrodi yemakethi yohlalutyo lwehlabathi
uqikelelo lwemalike ye-graphite electrode ukuya ku-2027 - ifuthe le-covid-19 kunye nohlalutyo lwehlabathi ngohlobo lwemveliso (amandla aphezulu, amandla aphezulu aphezulu, amandla aqhelekileyo); Ukusetyenziswa (iziko lombane le-arc, i-ladle furnace, abanye), kunye nejografi ”kongezwe ingxelo yophando kunye nemarkets.com.
Imakethi yaxabiswa kuthi i-6,564.2 yezigidi zeedola kwi-2019 kwaye kuqikelelwe ukuba ifikelele kuthi i-11,356.4 yezigidi nge-2027;
Kulindeleke ukuba ikhule kwi-cagr ye-9.9% ukusuka kwi-2020 ukuya kwi-2027.
I-graphite electrode yinto ebalulekileyo kwimveliso yensimbi ngokusebenzisa indlela ye-arc yombane (eaf). emva komjikelo ombi weminyaka emihlanu ezantsi, imfuno ye-graphite electrode yaqala ukubhengezwa ngo-2019, kunye nemveliso yentsimbi ye-eaf. kunye nelizwe elinolwazi ngakumbi ngokusingqongileyo kunye namazwe aphuhlileyo akhusela ngakumbi, umpapashi ulindele ukukhula okuzinzileyo kwimveliso yentsimbi ye-eaf kunye nemfuno yegraphite electrode ukusuka ngo-2020-2027.
Imakethi kufuneka ihlale ingqongqo kulongezo lwamandla e-graphite electrode.
Okwangoku, imakethi yelizwe jikelele ilawulwa yindawo ye-asia pacific accounting engama-58% yentengiso yehlabathi ngokudibeneyo. Imfuno ephezulu yee-electrode ze-graphite ezivela kula mazwe zibangelwa kukunyuka kwemveliso yentsimbi ekrwada. Ngokombutho wentsimbi wehlabathi, ngowama-2018, iChina kunye nejapan zavelisa i-928.3 kunye ne-104.3 yezigidi zeetoni zentsimbi ekrwada ngokulandelelana.
Kwi-apac, iivenkile zombane ze-arc zineemfuno ezibalulekileyo ngenxa yokunyuka kwezinto ezilahliweyo zentsimbi kunye nokonyuka kombane wombane e-china. Izicwangciso zentengiso ezikhulayo ziinkampani ezahlukeneyo kwi-apac ziyakhuthaza ukukhula kwimarike ye-graphite electrode kwingingqi.
abathengisi ngentsimbi abaliqela kwingingqi yasemntla Melika bajolise kakhulu kutyalo-mali kwiiprojekthi zentsimbi. ngo-matshi 2019, abathengisi bentsimbi e-us-kubandakanya i-dynamics yentsimbi inc., nathi i-steel corp., kunye ne-arcelormittal-batyale imali yethu eyi- $ 9.7 yezigidigidi iyonke ukukhulisa amandla abo okulungiselela iimfuno zelizwe liphela.